otu aka ime ụlọ ịwụ sink foset chrome
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ / WOWOW Chrome High Arc Bathroom Foset
WOWOW Chrome High Arc Bathroom Foset
N'etu oghere ya na mgbakwunye mgbakwunye mmapụta mkpọpụta mmiri, otu oghere ime ụlọ ịwụ a bụ akwa mgbakwunye na ohere ọ bụla.
Adịla mgbe ịkpụgharị: sọks ọla kọpa 2321501C na enyo dị ka njedebe chrome, ihe efu nke mara mma nke ukwuu, na anyị patted-trive curve forming nke pụrụ iche, mepụta ụlọ ịsa ahụ karịa gị.
2321501C ntuziaka nwụnye
Uclọ ịsa ahụ na-asa ahụ otu 2321501C
Na-achọ akwa mmiri nke ụlọ ịsa ahụ mara mma nke ejiri ọla kọpa siri ike? Anya ọzọ! WOWOW emeela ụlọ ịsa ahụ mara mma pụrụ iche, nke ga-enye ọmarịcha ihe ndozi ọ bụla nke ụlọ ịsa ahụ. Ndị na-emepụta WOWOW na-achọkarị ụzọ ọhụụ iji nye mmetụ pụrụ iche na ime ụlọ ịsa ahụ ya. Otu ụlọ ịsa ahụ na-arụ ọrụ otu nwere njiri mara ụdị pụrụ iche. Willgaghị ahụ ihe mmebe a ebe ọzọ na ị ga - azụta ụlọ ịsa ahụ nke bụ otu ụdị. Thiszọ ọnụọgụ atọ nke US gosipụtara na-emeziwanye ebe ịsa ahụ ọ bụla na-adị mgbe ị na-asa ahụ. N’enweghị mgbagha!
Mgbe ị na-emezigharị ma ọ bụ chepụta ụlọ ịsa ahụ ọhụụ, ị nwere ike chọọ itinye nlebara anya pụrụ iche maka ime ụlọ ịsa ahụ gị. A na-ahọrọ mmiri ịsa ahụ ịsa ahụ naanị na njedebe nke ọrụ ahụ mgbe ọ fọrọ obere ka mmefu ego dị (ma ọ bụ ọbụna gafere). N'okwu a, ị ga-ezere na ihe mebiri emebi nke ime ụlọ ịwụ ahụ gị bụ n'ihi nhọrọ na-adịghị mma gbasara isi mmiri ịsa ahụ gị. WOWOW na-egosipụta ugboro ugboro na nsị ụlọ ịsa ahụ dị oke mma nwere ike ị nweta ọnụ ala. Ma ka nwere nnukwu atụmatụ na-agbakwunye ọmarịcha, klaasị, na / ma ọ bụ mmetụ aka nke oge a na ime ụlọ ịwụ ahụ. Na WOWOW, anyị kwenyesiri ike na anyị na-enye uru kachasị mma maka ego ị nwere ike inweta.
Ebe a na-asa ahụ maka ime ụlọ ịwụ ahụ ga - eji mma kachasị mma maka ego
Ọdịmma nke ụlọ ịsa ahụ adịghị mma nke WOWOW enweghị eriri. Ngwaọrụ ya siri ike na-enye ogologo oge n'ogo arụmọrụ. Ga-achọpụta nke a mgbe ị na-ejide otu obere batrị WOWOW n'aka gị. Nke a bụ bọọlụ ọzọ atụnyere ọnụ mmiri ịsa ahụ na-adịghị ọnụ ahịa ị nwere ike ịchọta n’ahịa. N'aka nke ọzọ, WOWOWịgharighi n'ihe banyere ihe ọ bụla, na-eyi ndụ egwu imebi ụlọ ịsa ahụ ya. Na agbanyeghị, igwe ịsa ahụ WOWOW na-ejighị otu ọnụ bụ oke ọnụ. Anyị nwere ike ikwu na ị gaghị ahụta ezigbo uru maka ego. N'ihi nke a, anyị na-enye gị nkwa 90-day-guarantee guarantee. Ọ bụrụ n ’ị ga - achọta akwa mmiri nke yiri ụlọ ịsa ahụ na ọnụahịa dị ala, ma ọ bụ ụlọ mmiri ịsa ahụ dị mma karịa otu ọnụahịa, anyị ga-enye gị nkwụghachi zuru ezu. Enweghị ajụjụ jụrụ.
Nnukwu arc spout nwere onye na-echekwa mmiri. Onye a Neoperl Aerator dị elu na-enye ọwa mmiri dị nwayọ ma dịkwa nro maka nkasi obi kachasị mma. Ikwesighi ichegbu onwe gi banyere itisa mmiri. Uru ọzọ bụ ị nwere ike ịchekwa pesenti iri ise na mmiri site na iji ihe ohuru nke ime ụlọ ịwụ ahụ rụọ ọrụ nke WOWOW. Nwere ike wepu onye nrụpụta a ngwa-ngwa, na iji ngwa (etinye). N'ụzọ dị otu a ị nwere ike sachapụ onye nrụpụta ihe ugboro ugboro, na-ewepụ nsị siri ike, iji nye gị ahụmịhe ọrụ kachasị mma.
Nnukwu ụlọ ịsa ahụ na-anwale nke ọma
A nwalekọta ihe ndị mejupụtara otu ụlọ ịsa ahụ ma ọ bụ nke otu ime ụlọ ịsa ahụ ọtụtụ oge iji nye gị arụmọrụ kacha mma. Dịka ọmụmaatụ, a nwalere valvụ seramiki ka ọ dị ihe karịrị narị puku ise. Ma na, mgbe ule ndị a niile, valvụ ahụ gara n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma, na-enweghị mmiri, na-enweghị mgbapụta. Ezigbo ụlọ nwere ike iji mmiri ịsa ahụ na-erughị ugboro 500,000 kwa afọ. Nke a pụtara na ị nwere ike iji akwa mmiri nke ime ụlọ ịwụ a ruo ọtụtụ afọ, na-enweghị ịfufu arụmọrụ ya kachasị mma.
Na WOWOW, anyị nwere obi ike maka ogo na arụmọrụ nke ụlọ ịsa ahụ anyị. N'ihi ya, ụjọ anaghị atụ anyị inye gị akwụkwọ ikike afọ 3. Ọ bụrụ na pọmpụ ụlọ ịsa ahụ anaghị arụ ọrụ nke ọma n'ime afọ atọ a, anyị ga-eji akara ohuru dochie ụlọ ịsa ahụ gị. N'ụzọ dị otu a, enwetara gị ike maka ịrụ ọrụ na-aga n'ihu na mmiri ịsa ahụ. Anyị ji ọrụ anyị kpọrọ ihe, anyị ga-ejikwa ya n’enweghị obi abụọ ọ bụla. Ọ bụghị maka n’efu, anyị nwere otu ndị ahịa na-eto ngwa-ngwa nke mba niile.
Userzọ ịsa-mma nke ịsa-mma nwere otu ịsa ahụ
Na -eme ka mmiri mmiri ya na ọnọdụ ya wee nwee ike ijikwa otu aka na mmiri ịsa ahụ. Nwere ike iji naanị otu aka jikwaa mmiri mmiri, ka ị jiri aka gị jidekwa ya, dịka ọmụmaatụ mgbe ị na-ata ikikere ezé. Ga-achọpụta ịdị nwayọ nke arụmọrụ ozugbo ị jiri valve dị elu a. Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ oge niile iji rụọ aka a.
Igwe eji agba mmiri ime ụlọ nke chrome nke WOWOW na-abịa na stopa gụnyere gụnyere oke mmiri. Ngwongwo a na-apụta mma na-ejikọ otu na ime ụlọ ịsa ahụ gị, iji mepụta mmetụta ka ukwuu na nsonye kichin gị. Enwere ike iji naanị otu mbipụta rụọ ọrụ nhichapu mmapụta a. Ọ chọrọ naanị a
ntakịrị nrụgide a ga-arụ ọrụ. N'ihi usoro eji arụ ọrụ ya, ọ nwere ike ime ka mmiri ghara ịdị na-adọsa ime ụlọ ịsa ahụ gị ngwa ngwa.
Ingwụnye kit ụlọ ịwụ ahụ faucet otu aka
N'ihi iji ihe ọla siri ike, WOWOW nwere ike ikwe nkwa inye mmiri na-enweghị mmiri. N'ụzọ dị otu a, ị nwere ike inye ezinụlọ gị ahụmịhe mmiri adịghị mma ma ị gaghi echegbu onwe gị maka ịdị mma nke mmiri. Dịkarịa ala, ọ bụghị n'ihi mmiri ịsa ahụ gị. Ma n'ihi ịdịnwụ ya, WWEOW ime ụlọ ịwụ ahụ na-acha ọcha WOWOW nwere ike na-ekwe nkwa arụmọrụ a maka ọtụtụ, ọtụtụ afọ.
Akụkụ dị mma nke ụlọ ịsa ahụ ụlọ nke WOWOW bụ na ịnwere ike ịwụnye ya n'onwe gị na-enweghị ịkwanye onye ọrụ plọmba. Emebere ube mmiri nke ime ụlọ ịwụ a bụ nke dị iche na ụlọ ịsa ahụ ndị ọzọ wee nwee ike ịwụnye n’ime naanị nkeji iri atọ. Ọbụna mgbe ị bụghị ọkachamara. Otu akwa ime ụlọ ịsa ahụ nke WOWOW na-abịa na ngwa zuru oke nke na-ekwe nkwa idobe usoro dị mma: efere oche 30-inch (nke dabara ma ụlọ ịsa ahụ na-egwu mmiri 4 na nke 1), akwa mmiri na-agbawa chrom. 3-inch na-agbagha mmiri Tucai na mmiri nwere mmesi obi ike, na-etinye wụnye aka, ihe na-ewepụ ihe eji eme ya, na ndị ọzọ. N'ụzọ dị otu a, ọ dị mfe ime ya-iji aka gị dozie akwa mmiri ụlọ ọrụ WOWOW.
Uru nke ime ụlọ ịwụ ahụ bụ otu aka na a ga - ekwu ya:
Value Uru kacha mma maka ego
Water Ọgba mmiri na-arụ ọrụ nke ọma
 Ọdịdị pụrụ iche na nke mara mma
Materials Ihe eji arụ ọrụ dị elu
Ed Ngwunye na-eme onwe gị
SKU: 2321501C Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ Tags: imechara, lavatory foset, Naanị aka
59 sentimita asatọ
10 sentimita asatọ
8.7 sentimita asatọ
Ọnọdụ abụọ: Ọnọdụ raygba / Ọnọdụ iyi
Aka ekpe / aka nri / etiti
Mmiri njikwa mmiri
WEREOW 8 n'ime. Ebe a na-asa ahụ -lọ Ahụ Batrị 2
WWOWOW Centerset Bathroom Faucet with Pop-up Dra…